Maamul Wanaag: Nimcada Dhuldaaqsinka Dooxada Dharoor Xirmeyn & Maareyn Kabacdi (dhegayso & sawirro) – Radio Daljir
Maamul Wanaag: Nimcada Dhuldaaqsinka Dooxada Dharoor Xirmeyn & Maareyn Kabacdi (dhegayso & sawirro)
Luulyo 3, 2017 7:01 g 1
Xukuumadda Puntland oo kaashanaysa maamulka gobolka, kan degmada, dadka deegaanka, ayna hormuud u tahay Wasaaradda Deegaanka, Dalxiiska iyo Duurjoogta Puntland, ayaa markii taariikhda Puntland ugu horraysay waxay fulisay mashruuca maareynta iyo xirmeynta dhuldaaqsinka Dooxada Dharoor.
Dhuldaaqsimeedka Dooxada Dharoor oo markii hore biyuhu ka wareegeen, wixii cagaar soo baxana isla markiiba xooluhu quudan jireen, ayaa biyihiina lagu soo leexiyey, muddo 40 maalmood ahna laga mamnuucay daaqsinka xoolaha iyo cagta dadka.
Dooxada oo wada doog ah ayaa asbuucaan dib loo furay, loona fasaxay daaqsinka xoolaha.
Dhererka dhuldaaqsinka Dooxada Dharoor ayaa Wasaaraddu ku qiyaastay 70 KM, ballacana 30 KM.
Talada Dawladda Puntland iyo ficilka Wasaaradda Deegaanku waxay tusaale u noqonayaan, muujinayaana in talo kasta oo fayoow ay u baahantahay fulin dawladeed, shacabka badankiisuna ay mar kasta u heellanyihiin waxqabad waxtar wata iyo wadashaqayn dawladeed. Saas oo ay tahay, dawladda oo kaashanaysa dadka deegaanka ayaa looga fadhiyaa in ay macaan iyo kharaar isugu darto kuwa lidka ku ah hormarka dalka, badanaana aan aqoon durugsan u lahayn hormarka la hiigsanayo, ama xataa aan faham buuxa ka haysan waxa ay kahorimaanayaan, fikirkooda qalafsanna yahay mid ku kooban asbuuca oo kaliya, kana fog dan umadeed iyo hormar dawladnimo.
Maareynta Dooxada Dharoor waxay tusaale u noqonaysaa huggaan wanaag dawladeed, wasaarad shaqaynaysa, deegaan isku duuban, iyo wadatashi dadweyne iyo dawlo.
Warbixinta Xasan Heykal, Bossaso
Warbixinta Maxamed Lakiman, Garoowe
abdullahi ali Abdullahi 12 months
wan soo dhowayn xirmantna dooxada dharoor waxan u mahad celin ilaah ka sakoow dhamaan intii ka qayb qaadatay mamulka degmada iskushuban iyo dadka deegaanka tuuloyimka meeladeen dharjaale